Tahriibka Waa Jannada Doqomada! | Xaqiiqonews
Tahriibka Waa Jannada Doqomada!
Tahriibka ama si guud safarka waxaa uu qiimo u yeelayaa nolashaada taasi macnaheedu waxa ay tahay waxa aad ka heleysaa khibrad, hase yeeshee inta aadan safar gelin ka hor waa in aad fikirtaa kun jeer.
Waxaa laga yaaba in gurigaada hooyo aad kula soo laabatay dhaqamo iyo luuqad cusub oo aad soo baratay, waxaa laga yaabaa in uu kugu yeeshay safarkaaga saameeyn aan abid noolashaada ka hari doonin.
Adiga oo iska dhagatiraya waxyaabahan kugu dhacay oo dhan, xasuusnow sababta ugu badan ee dadka tahriibaya ama safraya ku andacoon oo ah “Waxaan heli doonaa nolal wanaagsan oo tan dhaanta”.
Runtii Safarka waa “baxsasho” qofka doonaayo in uu ka baxsado mushkilad heysata sida dhaqaale la’aan, Murugo iwm, xaqiiqduse ma sii shaqeyso fikradaasi.
Hadii aad tahriibto ama aad safarta oo adiga dareemaya mushkilad , isla dhibaatooyinkii ayaa jiri doono markii aad tagto meeshii aad ku hamineysay, maxaa yeelay wali waxa aad tahay isla qofkii!
-Gacmahaada Ku Sameyso Dunidaada
Waxa aad u baahantahay waa in aad nafsataada aad u sheegtaa runta, dhidibada u aas tiirarka noolashaada,sameey dhaqamo aad ku hagaajineyso caafimaadkaada,raadi hab aad ku dareemi karto farxad,micno malahan halka aad dunida ka joogto.
Nadiifi maskaxdaada, ku raaxeyso noolashaada intii aad ku dhaganaan laheyd “tahriibka” ku raaxeyso cimrigaada intii aad sugi laheyd dhimashadaada adiga oo la dhibaatoonaya cudur maskaxeedka Tahriibka.